Hantida bilyaneerada adduunka oo la sheegay in ay hoos u dhacday $388 bilyan sanadkii 2018… – Hagaag.com
Hantida bilyaneerada adduunka oo la sheegay in ay hoos u dhacday $388 bilyan sanadkii 2018…
Posted on 8 Nofeembar 2019 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Warbixin ay soo saartay mu’asasada UBS Financial Services ayaa muujisay in Maalqabeenada ugu taajirsan adduunka ay waxyar hoos u dhacday hantidooda sanadkii la soo dhaafay iyada oo sabab u aheyd xiisadaha juquraafi siyaasadeed iyo isbedelka suuqyada saamiyada oo hoos u dhacay markii ugu horreysay muddo toban sano ah.
Hantida bilyaneerada adduunka ayaa hoos u dhacday $ 388 bilyan oo gaartay $ 8.54 tiriliyan, sida lagu sheegay warbixinta bilyaneerada, oo ay diyaariyeen UBS iyo kooxda adeegyada xirfadda mihnadaha ee BWC.
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid dhaqaalaha Gobolka Greater China, oo ah halka ay ka yimaadaan bilyaneerada labaad ee ugu badan kadib Mareykanka, iyo gobolka ballaaran ee Asia-Pacific.
Bangiyada gaarka loo leeyahay, oo uu ku jiro UBS, oo ah kan maamula hantida ugu weyn adduunka ayaa waxay dareemeen saameynta xiisadaha ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo isbedbedalka siyaasadeed ee adduunka. Sannadkii hore, macaamiisha waxay iska fogeeyeen inay ka ganacsadaan qalabka bixinta deynta waxayna doorbideen inay keydsadaan inbadan oo soo deynsasho ah.
“Hantida bilyaneerada ayaa hoos u dhacday sanadkii 2018 markii ugu horeysay tan iyo 2008 sababtoo ah xaaladaha juqraafi siyaasadeed,” Joseph Stadler, oo ah madaxa waaxda saamilayda ee UBS, ayaa ku sheegay warbixin la soo saaray Jimcihii.
Hantida saafiga ah ee dadka ugu taajirsan Shiinaha ayaa hoos u dhacay 12.8 boqolkiiba ee doollarka Mareykanka iyada oo gadaal ka soo gaartay jahwareerka suuqa saamiyada, sidoo kale iyada oo hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta maxaliga ah iyadoo keentay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha labaad ee adduunka heerkiisii ugu hooseeyey muddo ku dhow sodon sano sanadkii hore 2018, taasi oo meesha ka saartay tobaneeyo bilyaneero liiska, warbixinta ayaa lagu sheegay.
Shiinaha .. Bilyaneer cusub labadii maalmoodba mar
In kasta oo uu jiro hoos u dhacan, hadana weli Shiinaha ayaa ka soo muuqanaya bilyaneer cusub laba ama laba maalmood iyo badh maalin kasta, Stadler ayaa yiri.
Caalamkoo dhan, tirada bilyaneeryada ayaa hoos udhacday gobollada oo dhan marka laga reebo Ameerika, oo ah halka shirkadaha teknoolojiyadda ay weli ku jiraan kuwa ugu taajirsan Mareykanka.
In kasta oo soo kabashada suuqyada saamiga ka soo baxayaan hoos u dhacii dhamaadka sanadka 2018 waxay ka caawisay maamulayaasha hodanka ah inay kordhiyaan hantidooda, qoysaska ugu taajirsan adduunka ayaa wali ka walaacsan dhibaatooyinka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin xiisadaha ganacsiga, iyo ka go’ida Britain ee Midowga Yurub iyo isbedelka cimilada, taas oo sii xoojinaysa deyn qaadasho dheeraad ah. .
“Hantida bilyaneerada waxay u badan tahay inay dib u soo laabato sannadkan mar kale,” ayuu yiri maamulaha maalgelinta macaamiisha ee UBS, Simon Smiles, isagoo intaas ku daray in kororku uu noqon doono mid aan badnayn marka loo eego xoogga suuqa dhaqaalaha.